झुक्किएर पनि खाली पेटमा कहिल्यै नखानोस् यी खानेकुरा !! – live 60media
झुक्किएर पनि खाली पेटमा कहिल्यै नखानोस् यी खानेकुरा !!
खानपानको तौरतरिका तथा समय मिलाउदा शरीर स्वस्थ हुन्छ । सामान्यतयाः फलफूल भनेर हामि जुन बेला पनि खान तयार हुन्छौ । तर हाम्रो त्यस्तो सोचाईं गलत हो । जानकारहरूका अनुसार यी खानेकुरा खाली पेट खानुहुँदैन ।
अमिला फलफूल : अमिला फलफूलमा अधिकांशको रुची हुन्छ । तीमध्ये सुन्तला त धेरैको प्रीय नै मानिन्छ । तर यही सुन्तला खाली पेट खायो भने मानव शरीरका लागि विष बन्न सक्छ ।त्यसकारण अमिलो फलफूल खाली पेट खानुको सट्टा नास्ता गरेर खानु उपयुक्त हुने जानकार बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :यी हुन कपाललाई नरम बनाउने पाँच उपाय !!!:१) मुसुरोको दाललाई पानीमा भिजाएर कपाल धुँदा यसले कपाललाई नरम तथा चम्किलो बनाउँछ।२) गिलास पानीमा एक चम्चा चियाको पत्ती हालेर केही समय उमाल्ने । त्यसमा कागतीको रस हाल्ने । यस्तो मिश्रणले कपाल पखाल्दा कपालमा चमक आउँछ।
३) एक गिलास बियर लिएर कन्डिसनरजस्तै गरी कपालमा लगाउने। यसले कपाललाई चमकदार बनाउँछ।४) कपाल सुक्खा छ, तथापि आफूलाई प्याक लगाउने फुर्सद छैन भने दुई चम्चा मह तथा दुई चम्चा रमलाई पानीमा हालेर कपाल पखाल्ने । यसले पनि कपाललाई नरम तथा चम्किलो बनाउँछ।
५) कपालमा विभिन्न किसिमका केमिकल मिसिएका सामानको अधिक प्रयोग गर्नु राम्रो हुँदैन। केमिकल स्टेनिङ, कलरिङ आदि प्रक्रियाले कपाललाई कडा बनाउनुका साथै दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ।
← मनोज गजुरेलसंग डिभोर्स भएको तीन वर्ष : ‘डिभोर्स एनिभर्सरी’ मनाउँदै यसरी रमाइन् मिना ढकाल .(भिडियो हेर्नुस्)
आफ्नो जन्मदिनमा सलमानले आफ्ना फ्यानलाई यसरी दुखी बनाए, कहिल्यै नभएको घटना भयो →